Ny fiaraha-midinika amin'ireo mpandraharahan’ny solika no vahaolana ahafahana manena ny vidin-tsolika eny anivon'ireo Toby mpaninjara hoy ny mpahay toe-karena nanazava ny firafitry ny vidin-tsolika eto amintsika. Ankoatry ny vidiny eo amin’ny iraisam-pirenena izay tsy miankina amintsika, efa manampy amin'ny fanenana ny vidin-tsolika ny fanjakana koa rariny raha ny fijerena ny saram-pitaterana sy ny tombom-barotra alain'ireo mpamatsy solika no hijerena vahaolana hoy ny fanazavana.
Volana vitsivitsy izao, marin-toerana ny vidin-tsolika eto amintsika, marin-toerana saingy lafo. Raha ny rafitra ny vidin-tsolika amin'izao fotoana, avo roa heny amin'ny vidin'ny solika amin'ny ahatafidirana eto Madagasikara, eny amin’ny seranantsambo ny vidin'ny solika rehefa tonga eny amin'ireo Toby mpaninjara. Ankoatry ireo haba izay efa a en an'ny fanjakana ankehitriny hitsinjovana ny tsy hidanganan'ny vidin-tsolika, avo dia avo ny saran'ny fitaterana ny litatra sy ny vola alain'ireo kaompanian-tsolika.
Raha mikasika ny vidin'ny gasoil kosa dia ny 25%ny vidin'ny solika ividianan'ny mpanjifa azy dia saran'ny fitaterana sy ny tombony alain'ireo kaompanian-tsolika. Ary raha tokony ho 27%ny haba alain'ny fanjakana dia efa nahena ho 8% izany mba hikajiana ny vidin'ny gasoil tsy hidangana. Ny fanenana ny saram-pitateran' ny litatra sy famerenana ny kajy mikasika ny tombom-barotra ireo kaompanian-tsolika araka izany no vahaolana sisa mipetraka, mahomby ary tsy maintsy apetraka hanenana ny vidin-tsolika. Ary efa Miroso amin'izany ny fitondrana ankehitriny.